क्षेत्रीय अस्पतालमै छैन औषधिः के हेरेर बस्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ? « प्रशासन
क्षेत्रीय अस्पतालमै छैन औषधिः के हेरेर बस्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ?
पोखरा । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) पोखरामा पति बाबुराम विकको उपचार गराउन आएकी पोखरा ३१ बेगनासकी सावित्री विकले उपचारपछि अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि लिन जाँदा रित्तै हात फर्कनुपर्‍यो । स्वास्थ्य बिमासमेत गराएकी विकले पतिको मिर्गौलामा समस्या आएपछि हप्ताको २ पटक डायलासिस गराउन अस्पताल धाउँदै आएकी छन् । गत महिनादेखि अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नपाउँदा महँगोमा बाहिरबाट किन्नुपरेको उनले सुनाइन् । मिर्गौला डायलासिसको औषधि महँगो हुने भएकाले समस्या परेको उनको गुनासो छ ।
पश्चिमाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (गण्डकी अस्पताल) पोखरामा दैनिक १ हजार बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । यो अस्पताल ३ सय ५० शड्ढयाको हो ।
अस्पतालमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका धेरै जिल्लाबाट बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन् । यति ठूलो अस्पतालको फार्मेसीमा आपूर्तिकर्ताका कारण देखाएर महिनौंदेखि औषधि अभाव हुनु दुःखद रहेको अस्पतालका कर्मचारी सुनाउँछन् ।
चैतको दोस्रो सातादेखि अस्पतालको फार्मेसीमा केही औषधि अभाव रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्देशक डा। अर्जुन आचार्यले बताए । औषधि आपूर्तिकताले औषधि ल्याउन ढिलाइ गरेकाले यस्तो अवस्था आएको तर छिट्टै समस्या समाधान हुने उनले बताए । बिरामीले पहिले जुन औषधि प्रयोग गरिरहेको हो त्यही नामको औषधि खोज्ने भएकाले पनि बढी अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । यो खबर हामीले आजको अन्नपुर्ण पोष्टबाट लिएका हौं ।